यौन जिज्ञासा Archives - Sawal Nepal
काठमाडौं । अस्ट्रेलियाकी पूर्व सुपरकार चालक रेनी ग्रेसी आर्थिक अवस्थाका कारण पोर्न स्टार बनेकी छिन। पोर्न स्टार भएपछि उनका बुबा उनीमा गर्व गरेको बताउछिन । सुपरकारको १४ बर्षे ईतिहासमा पहिलो महिला सुपरकार चालक बनेकी ग्रेसीले एक अन्तर्वाताको क्रममा उनी पोर्नस्टार भएको कुरा उनका बुवाले थाहा पाएपछि उनलाई यो कुरामा सर्पोट गरेको बताईन । ग्रेसीले भनीन
कुरा अनौठो र भ’ड्किलो लाग्न सक्छ । किनभने हामीकहाँ यौ७ नको कुरा गर्नसाथ हामी ला-जले खुम्चन्छौं । हामीलाई लाग्छ, यौ७ न भनेको छा,डा कुरा हुन् । यही भ्र-मित मा’नसिकताले हामी यौ७ नको बारेमा खुला चर्चा गर्दैनौ, यौ७ नको उ’न्मुक्त आनन्द लिदैनौं । अध्ययनहरुले भन्छ, यौ७ नसुख नै दाम्पत्य सफलताको प्रभावकारी सूत्र हो । तर, हाम्रो
काठमाडौं। पूर्व पोर्नस्टार मिया खलिफा एक पटक फेरि चर्चामा आएकी छिन् । पछिल्लो पटक भारतमा भइरहेको किसान आन्दोलनलाई समर्थन गरेर चर्चामा आएकी मियाको एउटा भिडियो फेरि चर्चामा छ । भिडियोमा मियाले भारतीय परिकारको डिनर खाँदै छिन् र यसबारे बताइरहेकी छिन् । उनका अनुसार उनले पछिल्लो समय मानवताका लागि फैलाइरहेको प्रोपोगाण्डाको लागि उनलाई यो डिनर उपहार
प्रकाश अधिकारी/कर्णाली, २३ माघ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका- ५ की ३७ वर्षीया महिलाले प्रदेश अस्पताल सुर्खेतबाट पछिल्ला तीन वर्षयता दुई पटक गर्भपतन गराइन् । दुवैपटक सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएपछि परिवार नियोजनका साधनको नियमित प्रयोग गरिनन् । ‘दुई सन्तान छोरी जन्मिसकेका थिए, परिवारमा छोरा चाहिन्छ भन्ने दवाव आयो, छोराकै आशमा दुईपटक गर्भपतन गराउन बाध्य भएँ’, उनले भनिन्,
यौन दुर्वलता धेरै मानिसका लागि पीडाको विषय बनेको छ।यो समस्या समाधान गर्न धेरै औषधिको प्रयोग गर्दा पनि समस्या समाधान हुँदैछ।जसले स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन समस्या उत्पन्न हुनसक्छ । यौनशक्ति बढाउन घरेलु उपाय नै लाभान्वित हुने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।यौन दुर्वलता धेरै मानिसका लागि पीडाको विषय बनेको छ । यो समस्या समाधान गर्न धेरै औषधिको प्रयोग गर्दा
लैंगिक महिलाहरुमाथि प्रहरीको ज्यादति,राज्यले किन गर्छ निच स्तरको व्यवहार?
‘लाज !मलाई लाग्दैन।कुट्दा यी पनि मान्छे हुन् भनेर उनीहरुले लाज मानेनन्। कहाँ–कहाँ चोट लागेन? सबै चोटहरु देखाउँछु।’यसो भन्दै गर्दा बबिता मैनालीले लगाएको कालो ओभरकोट कुम तल झार्दै पाखुरा र छातीमा लागेको चोट देखाइन् । पाखुरामा लौरीका डाम छन् ।घाँटी तल निल डाम र खाता बस्दै गरेका घाउ छन् ।२९ वर्षकी बबिता अहिले काठमाडौँ प्रहरी परिसर
१२ वर्षका बालबालिकासँग यौनलाई स्वीकृति, सम्बन्धविच्छेद अवैध !अब फेरिँदैछ कानुन
काठमाडौं। निश्चित उमेर नपुगेका बालबालिकासँग सहमतिमै राखिएको यौन सम्बन्ध पनि बलात्कार मानिन्छ । नेपालमा यौन सम्बन्धको लागि सहमत हुन कम्तीमा १८ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ । अर्थात १८ वर्ष नपुगेका कसैसँग पनि राखिएको यौन सम्बन्ध बलात्कार ठहरिन्छ चाहे त्यो सहमतिमै भएको किन नहोस् । केही देशहरुमा यो उमेर २० वर्ष वा सोभन्दा बढी पनि तोकिएको
काठमाडौं। कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट बचेर यौन सम्बन्ध राख्नका लागि सुझाव दिने क्रममा अस्ट्रेलिया सरकारले निकै विचित्र सुझाव दिएपछि त्यहाँका मानिसहरु टाउको ठोक्न बाध्य भएका छन् । न्यू साउथ वेल्सको स्वास्थ्य वेबसाइट प्लेसेफका यी सुझाव देखेर मानिसहरु जिल्ल परेका छन् । सुझाव दिने क्रममा मानिसहरुलाई कोरोनाबाट बच्नको लागि यौन सम्बन्धका क्रममा १.५ मिटरको दूरी कायम गर्न भनिएपछि
यौन शक्ति बढाउने भियाग्राले गुम्नसक्छ आँखाको ज्योति ?
विश्वभरमा निकै मानिस यौन पावर बढाउनका लागि औषधि खाने गर्दछन् । भियाग्रा जस्ता कैयौं औषधिको प्रयोग गरेर यौन पावर र समय त बढ्छ नै तर, यसले शरीरमा निकै घातक साइड इफेक्ट पनि पार्दछ । अध्ययनका अनुसार यौन क्षमता बढाउनका लागि औषधि प्रयोग गर्नु स्वास्थ्यका लागि निकै घातक मानिएको छ । अध्ययनअनुसार उत्तेजना बढाउने औषधिले दृष्टिविहीनसमेत
यो संसारमा धेरै प्रकारका मानिस हुन्छन , भनिन्छ मनुष्य भित्र २ प्रकारका मानिस हुन्छन , पुरुष र महिला , तिनिहरुमा यस्तो मान्छे पनि हुन्छन जुन हामी भन्दा केहि फरक हुने गर्छन ।जसलाई हामी ट्रांसजेंडर अर्थात तेस्रोलिङगी भन्छौं । वास्तवमा , ट्रांसजेंडरलाई पुरुष र महिलाहरुको कैटेगरीमा समावेश गर्न सकिदैन , यस प्रकारका मानिसहरुमा महिला र पुरुष